IGroove: iTikiti leNcediso leTikiti lamaQela eNkxaso | Martech Zone
IGroove: Itikiti lokunceda iTikiti leeNkxaso zeeQela
Ukuba uliqela elithengisayo elingena ngaphakathi, iqela lenkxaso yabathengi, okanye iarhente uyayiqonda ngokukhawuleza indlela ithemba kunye nezicelo zabathengi ezinokulahleka ngayo kulwandiso lwee-imeyile umntu ngamnye azifumana kwi-Intanethi. Kufuneka kubekho iindlela ezingcono zokuqokelela, ukwabela kunye nokulandelela zonke izicelo ezivulekileyo kwinkampani yakho. Kulapho isoftware yedesika yoncedo iza kusebenza khona kwaye inceda ekuqinisekiseni ukuba iqela lakho ligxile ekuphenduleni nakwinkonzo yabathengi.
INkxaso yeNkqubo yokuTikiti kweKhompyutha kwi-Intanethi
Itikiti lamaQela -Nikezela amatikiti kumalungu athile eqela okanye kumaqela. Yongeza amanqaku abucala abonwa nguwe kuphela neqela lakho. Buza imibuzo, wenze iingcebiso, okanye uphonononge imiyalezo evela kumalungu eqela elitsha ngaphambi kokuba ithunyelwe. Bona kanye ukuba kwenzeka ntoni eGroove ngexesha lokwenyani. Uya kwazi xa kunikwa amatikiti, kugqityiwe, kuvulwa kwakhona, okanye kukalwa.
Ulwazi olunenkcukacha zabathengi - Akusekho kuzingela amatikiti amadala ukubona ukuba umthengi uthetha ngantoni. Fikelela kuyo nayiphi na imbali yenkxaso yabathengi ngonqakrazo olunye.
Izixhobo zemveliso -Gcina iimpendulo kwimibuzo eqhelekileyo, kwaye uyifake ngonqakrazo kuwo nawuphi na umyalezo. Yenza iilebheli zesiko lokucwangcisa amatikiti okanye uwathabathe ukuze zisetyenziswe kwixesha elizayo usebenzisa nayiphi na inkqubo esebenza ngokukuko Sebenzisa imigaqo ukuzenzekelayo kwindlela amatikiti aphathwa ngayo. Umzekelo, nika itikiti kwilungu leqela ngokusekwe kubantu abavela kubo, okanye imiyalezo yeflegi ebandakanya igama ngxamisekileyo.
Imeyli -Ingxaki yenkqubo yetikiti lenkathazo ibukeka kwaye ivakalelwa kanye njenge-imeyile kubathengi bakho. Abathengi bakho ngekhe baphinde bangene kwenye inkqubo yokungena okanye babhekise kwinombolo yetikiti ukufumana uncedo.
Imidiya yokuncokola -Bona kwaye uphendule kwiiTweets nakwizithuba zodonga lwe-Facebook ezikhankanya uphawu lwakho, kwaye ngokulula ujike izithuba zentlalo zibe ngamatikiti enkxaso.
Landelela inkxaso yefowuni -Log amanqaku amanqaku ngeencoko zefowuni ezinokugcinwa njengetikiti, ke ziya kuvela kwimbali yomthengi wakho kwaye ungazikhomba nangaliphi na ixesha.
Ukulinganiswa ngokwanelisayo -Vumela abathengi bakho ukuba bakalale iimpendulo zakho kwaye bakunike ingxelo.
Okubelelwe elwazini -Nceda abathengi bakho kwi-Intanethi bazincede ngesiseko solwazi.
Ukudityaniswa kweTikiti lokuXhaswa kweTikiti
widget -I-widget yenkxaso yeGroove iqinisekisa ukuba abathengi bahlala beyazi indlela yokunxibelelana, kwaye inokwenziwa ukuba izive ngathi yinxalenye engenamthungo kwindawo yakho.
API - Sebenzisa eyethu API ukutsala idatha yomthengi kwi-CMS yakho yangaphakathi, usetyenziso lokuhlawula, okanye nayiphi na isoftware yomntu wesithathu, kwaye uyibone kwiprofayile yomthengi ecaleni kwalo naliphi na itikiti.
Chat Live -Amanyathelo amabini i-SnapEngage okanye i-Olark yokudityaniswa kwengxoxo bukhoma ukugcina izingxoxo zakho eGroove kwaye uxhase abathengi bakho ngexesha langempela.
CRM - Qhagamshela iGroove ukuya kuHighrise, iBatchbook, iNimble, iZoho okanye iCapsule kwaye ufumane ukufikelela ngokulula kulwazi olunzulu lwabathengi kwiCRM yakho, ejongeka kanye ecaleni kwetikiti ngalinye. Ukuba akonelanga, babonelela ngokudityaniswa noZapier.
Imeyli -I-imeyileChimp, ukujonga iMikhankaso, kunye nokudityaniswa rhoqo koNxibelelwano.
Musa -Ukudityaniswa ngokuthe ngqo kwiqonga lonxibelelwano leqela lakho.
emseleni yinkqubo yokuhlawula njengoko unokongeza kwaye ususe abathengi kwiakhawunti yakho, ubhatale i- $ 15 ngomsebenzisi ngenyanga.
Qalisa uvavanyo lwakho lwasimahla lweentsuku ezingama-30
tags: Iwijethi ye-APIIncwadiI-Monitor MonitorCapsuleQha ga mshelwanoIndawoemseleniiwijethi yoncedoyenkxasoUnyukela phezulumailchimpNimbleOlarkSnapEngageinkxasoIqela lenkxasoi-widget yenkxasomaqelaUkunika amatikitizapierZoho
Iimpawu eziphambili zeMatriki zoThengiso lwangaphakathi
Enkosi ngokwabelana ngolwazi olukhulu malunga nenkqubo yeTikiti lokuNceda i-Helpdesk, ukuba iluncedo njani ekuxhaseni amaqela